News - Cilmi baaris ayaa leh suuqa moduleka muraayadaha indhaha wuxuu ka badnaan doonaa USD17.7 bilyan sanadka 2025, iyadoo ay ugu badantahay xarumaha xogta
Cabirka suuqa ee modullada indhaha wuxuu gaarayaa kudhowaad USD7.7 bilyan sanadka 2019, waxaana lafilayaa in kabadan labalaab illaa kudhowaad USD17.7 bilyan sanadka 2025, oo leh CAGR (heerka kobaca sanadlaha isku dhafan) oo ah 15% laga bilaabo 2019 ilaa 2025. ” Falanqeeyaha YoleD & Veloppement (Yole) Martin Vallo ayaa yiri: “Kobacaani wuxuu ka faa’iideystay hawl wadeenada adeegga daruuraha baaxadda weyn leh ee bilaabay inay isticmaalaan qaddarro badan oo xawaare sare oo qaali ah (oo ay ku jiraan 400G iyo 800G). Intaa waxaa dheer, shirkadaha isgaarsiinta ayaa sidoo kale kordhiyay maalgashiga shabakadaha 5G. ”
Yole wuxuu tilmaamay in laga bilaabo 2019 ilaa 2025, baahida loo qabo modulesyada indhaha ee suuqa isgaarsiinta xogta ay gaari doonaan CAGR (heerka kobaca sanadlaha isku dhafan) oo qiyaastii ah 20%. Suuqa isgaarsiinta, waxay ku guuleysan doontaa CAGR (heerka kobaca sanadlaha isku dhafan) oo qiyaastii 5% ah. Intaas waxaa sii dheer, saameynta cudurka faafa, wadarta dakhliga ayaa la filayaa inuu si dhexdhexaad ah u kordho sanadka 2020. Xaqiiqdii, COVID-19 waxay si dabiici ah u saameysay iibinta mootooyinka indhaha adduunka. Si kastaba ha noqotee, oo ay hogaamineyso istiraatiijiyadda 5G geynta iyo horumarinta xarunta xogta daruuraha, baahida loo qabo modules indhaha ayaa aad u xoogan.
Sida laga soo xigtay Pars Mukish, oo ah falanqeeye ka shaqeeya Yole: “25-kii sano ee la soo dhaafay, horumarinta tikniyoolajiyadda isgaarsiinta fiilada indhaha ayaa horumar weyn sameysay. Sagaashameeyadii, awoodda ugu badan ee iskuxirayaasha fiilooyinka muraayadaha ganacsiga waxay ahaayeen oo keliya 2.5-10Gb / s, haddana xawaaraha gudbintoodu wuxuu gaari karaa 800Gb / s. Horumarradii la sameeyay tobankii sano ee la soo dhaafay waxay suurtageliyeen nidaamyo isgaarsiineed oo dijitaal ah oo tayo sare leh oo suurtagal ah isla markaana lagu xalliyay dhibaatada hoos u dhigista calaamadaha. ”
Yole wuxuu tilmaamay in kobcinta tiknoolajiyada badan ay awood u siisay xawaaraha gudbinta ee masaafada dheer iyo shabakadaha metro inay gaaraan 400G ama xitaa ka sareeyaan. Isbedelka maanta ee ku saabsan qiimaha 400G wuxuu ka yimid dalabyada ka shaqeeya daruuraha ee isku xidhka xarunta xogta. Intaas waxaa sii dheer, koritaanka jibbaaranaha ee awoodda isku xirnaanta xiriirka iyo tirada sii kordheysa ee dekedaha indhaha ayaa saameyn weyn ku yeeshay teknolojiyadda moduleka indhaha. Naqshadaynta qaab-dhismeedka cusub ayaa aad u sii kordheysa, waxaana looga golleeyahay in lagu yareeyo cabirkiisa, iyadoo markaa la yareynayo isticmaalka awoodda. Module-ka dhexdiisa, aaladaha muraayadaha indhaha iyo wareegyada isku dhafan ayaa marba marka ka dambeysa isku soo dhowaanaya.
Sidaa darteed, qalabka 'silicon photonics' wuxuu noqon karaa tiknoolajiyadda muhiimka ah ee xalalka isku xirnaanta mustaqbalka si loola tacaalo taraafikada sii kordheysa Teknolojiyadaani waxay door muhiim ah ka ciyaari doontaa codsiyada u dhexeeya 500 mitir ilaa 80 kiilomitir. Warshaduhu waxay ka shaqeynayaan inay si toos ah ugu dhex daraan leysarka InP-ga jajabka silsiladaha si loo gaaro is-dhexgalka kaladuwan. Faa'iidooyinkeedu waa isdhexgalka la cabbiri karo iyo baabi'inta qiimaha iyo kakanaanta baakadaha indhaha.
Dr. Eric Mounier, oo ah falanqeeye ka shaqeeya Yole, wuxuu yiri: sida PAM4 Ama QAM. Farsamo kale oo lagu kordhiyo heerka xogta waa isbarbaryaac ama isku dhufasho. ”